ရင်ထဲက ရှစ်ဆယ့်ရှစ် အပိုင်း (၄) ဆောင်ပါးရှင် (မောင်မောင်ဝမ်း) ~ ဒီမိုဝေယံ
ရင်ထဲက ရှစ်ဆယ့်ရှစ် အပိုင်း (၄) ဆောင်ပါးရှင် (မောင်မောင်ဝမ်း)
ရင်ထဲက ရှစ်ဆယ့်ရှစ် အပိုင်း (၄)
ကျနော် အဲဒီ့တညလုံး ကောင်းကောင်းမအိပ်ခဲ့ရဘူး။ အားလုံးကလည်း အကွဲကွဲအပြားပြား ဖြစ်ကုန်ကြပြီ၊ ဘယ်ရောက်လို့ ဘယ်ပေါက်ကုန်မှန်းမသိ၊ သပိတ်စခန်းထဲမှာ ရှိနေတဲ့ လူဦးရေ ကြည့်လိုက်တော့ အယောက် ၂၀တောင် ကောင်းကောင်း မပြည့်ချင်ဘူး၊ တော်တော်လေး ထိတ်လန့်ပြီး စိုးရိမ်နေမိတာ အမှန်ပဲ… ဘယ်အချိန်များ ငါတို့ကိုဝိုင်းပြီး ဖမ်းမလည်းပေါ့..။ ဒါပေမဲ့ ပတ်ချာလည်မှာ ၀ိုင်းပတ်နေတဲ့ အိမ်တွေက လူတွေနဲ့ သပိတ်စခန်းရှိရာ ဆုံတိုက်ရပ်ကွက်က ပြည်သူတွေက အမာခံ ကာကွယ်ပေးထားတယ်။ ဒုတ်တွေ၊ ဓါးတွေ ဂျင်ကလိလက်နှက်တွေ ကိုင်ဆောင်ပြီး ညလုံးပေါက် ကင်းစောင့်ပေးရှာတယ်။ ကြားဖြတ်ပြီး တခုပြောချင်သေးတယ်။ ဂျင်ကလိဆိုတာ မျှားပုံစံ လုပ်ထားတဲ့ သံချောင်းအတိုလေး။ လောက်လေးဂွနဲ့ ထဲ့ပစ်တာ… အဲဒါမှန်လိုက်လို့ကတော့ တော်တော်မလွယ်ဘူးဗျ။ အာဏာပိုင်တွေဟာ.. အဲဒီ့ဂျင်ကလိ လက်နှက်ကို တော်တော်ကြောက်ကြတယ်။ တော်တော်လှမ်းတဲ့ အကွာဝေးထိ လှမ်းပစ်လို့ရတယ်။
သြဂုတ်လ ( ၇ ) ရက် ၁၉၈၈
မနက်လင်းလင်းချင်း ရောက်လာတာက ကျနော့်အမေ.. အူးယားဖားရားနဲ့ ရောက်လာတယ်။ ကျနော့်ကိုမြင်လိုက်မှ တော်တော်စိတ်ချမ်းသာ သွားပုံရတယ်။ သူလည်းတညလုံး မအိပ်ရသေးဘူး…
“အိမ်ကိုညက ရဲတွေအထပ်ထပ်ဝိုင်းပြီး… မင်းကိုလာရှာတယ်… တအိမ်လုံး လိုက်ရှာကြတာ ဗြောင်းဆန်နေတာပဲ.. ရဲအရာရှိတယောက်က ငါ့နားထင်ကိုသေနတ်နဲ့ ထောက်ပြီး.. ခင်ဗျားသား ဘယ်မှာလည်း မှန်မှန်ပြောဆိုပြီး.. မေးတယ်.. ငါကလည်း အမှန်ပြောတာလေ.. ကျမဘာမှမသိဘူး..သူလုပ်တာတွေက.. သူစိတ်သူ့သဘောနဲ့လုပ်တာ.. ကျမလည်းဘာမှမပြောဘူး…။ ဆိုတော့.. တော်တော်ရိုင်းကြတယ်ကွာ… ပြောတာဆိုတာတွေက… လူမဆန်ဘူး… တခါမင်းညီတွေရော ကျန်တဲ့ အလုပ်သမားတွေရောကို ၀မ်းလျှားမှောက်ခိုင်းပြီး ထားတယ်… ငါမင်းအတွက်တော် တော်စိုးရိမ်တာ… ဆုတောင်းလိုက်ရတာ အမောပဲ။ မင်းကိုတွေ့မသွားတော့.. သူတို့တော်တော်လေး ဒေါကန်နေပုံရတယ်။ တော်တော်များများလည်း အဖမ်းခံရတယ်လို့ကြားတယ်.. လူအယောက် ၃၀လောက်မြို့မ ရဲစခန်းအချုပ်ထဲမှာ အခုဖမ်းထားတယ်တဲ့…”
အမေနဲ့ အိမ်သားတွေ အတွက် တော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်.. မနက် ၇နာရီလောက် ရောက်တော့ လူတွေတဖွဲဖွဲ သပိတ်စခန်းရှိရာကို ရောက်လာကြတယ်။ ဒါပေမဲ့.. ကျနော်တို့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်တွေက စုစည်းလို့ မရသေးဘူး။ ယာယီ ဥက္ကဌ တင်ထားတဲ့.. စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ကိုကံတင်ကလည်း အဖမ်းခံလိုက်ပြီ။ ဖြစ်ချင်တော့… လှုပ်ရှားမှု အဖြိုခွဲခံရပြီး နောက်ကိုယ့်အိမ်တွေ ကိုယ်ပြန်အိပ်ကြတဲ့ သူတွေ အကုန်နီးပါးလောက် အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်။
ကျောင်းသားရယ်လို့ပြန်စုစည်းလို့ရတာ ကျနော်ရယ် ၊ မြင့်ငွေ ၊ ကိုဝင်းရွှေ ၊ ကိုပေါက် (ဂျီတီအိုင်)လောက်ပဲ ရှိတော့တယ်..ကျန်တဲ့သူတွေ ပြန်ဆုံလို့မရသေးဘူး… လူအယောက်၁၀၀လောက် သပိတ်စခန်းထဲမှာ စုစည်းမိတယ်ဆိုရင်ပဲ။ မြင့်ငွေက လူထုတရားပွဲကို စကျင်းပတယ်။ မနေ့ညနေက ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်မှာ သူက ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ခဲ့သူဆိုတော့.. အပ်ကျမတ်ကျ ပြောပြနိုင်တယ်လေ။ လူထုရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုဖြစ်သွားသလည်းဆိုတော့.. အစိုးရရဲ့ ဗြောင်ကျကျ လိမ်ညာမှု့ကြီးကို အတော်ကို စက်ဆုပ်သွားကြတယ်။ တဖြေးဖြေးနဲ့ လူတွေက သပိတ်စခန်းထဲက ရောက်လာလိုက်ကြတာ လည်ပေါ် သာသနာ့ဗိမ္ဗာန်ထဲမှာ အပြည့်လောက်ရှိနေပြီ။ မကြာခင်ပဲ.. ကျနော်တို့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ထဲက.. ကျော်စွာမြင့် ရောက်လာတယ်.. အားလုံးကတော်တော် ၀မ်းသာသွားကြပြီ… သူနဲ့အတူ မန္တလေး ဆေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား.. အောင်မျိုး (ယခုကင်ဆာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး..စင်္ကာပူ) ပါပါလာတယ်လေ။ အားတွေကို ပြန်စုနိုင်ကြပြီ… ဒီလိုနဲ့မနက် ၉နာရီလောက်ရောက်တော့ မြို့လည်ထဲက ပစ်ခတ်နေတဲ့ သေနတ်သံတွေကို အတိုင်းသား ကြားနေရတယ်..။ သတင်းလာပို့သူတွေ ကလည်း.. အပြေးအလွှား သတင်းလာပို့ကြ။
“မြို့ထဲမှာ… လူစုစုရှိတဲ့ နေရာတွေကို လိုက်ဖြိုခွဲနေတယ်။ ရဲတွေအများကြီးပဲ… လဘက်ရည်ဆိုင်ထဲက စားပွဲထိုးလေး တယောက်က ပုဆိုးလှန်ပြလို့ဆိုပြီး သေနတ်နဲ့ပစ်လိုက်တာ.. ပွဲချင်းပြီးသေသွားတယ်။ သူ့နံမည်က.. ရာကူ..တဲ့… နောက်ဆိုက်ကားစီးလာတဲ့.. တယောက်သေနတ် ကျည်ဆံ ပါးစပ်မှန်သွားတာ.. ဆေးရုံကိုချက်ခြင်း ခေါ်သွားတယ်.. သူ့နံမည်ကဦးသောင်း… နောက်ထပ်လည်း သေတဲ့သူတွေ မှန်တဲ့သူတွေ ရှိသေးတယ်ကြားတာပဲ…. အဲဒီနေ့က ကျနော်တို့ သပိတ်စခန်းကနေ ပြင်ပထွက် စီတန်းဆန္ဒပြမှု မလုပ်ဘို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်ကြတယ်.. သပိတ်စခန်းကိုပဲ ကျ မသွားအောင် အကာကွယ်ပေးဘို့.. ပြည်သူလူထုကို မေတ္တာရပ်ခံခဲ့တယ်။
ကျောင်းသားသမဂ္ဂကိုလည်း.. ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြတယ်။ ကျနော်က ဥက္ကဌ ၊ ဒု ဥက္ကဌက ကျော်ဆန်းဦး ၊ အောင်မျိုးက အတွင်းရေးမှုး၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှုး ကျော်စွာမြင့်နဲ့ မြင့်ငွေက အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းသားများအဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင် တာဝန်တွေကို ယူခဲ့ကြတယ်…။ ညရောက်တော့ လူထုက ကျနော်တို့ကို မေတ္တာရပ်ခံတယ်။ ကျနော်တို့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေ ကျလို့မဖြစ်ဘူး ဒါ့ကြောင့် ကျနော်တို့ကို လုံခြုံတဲ့နေရာမှာ ထားမယ်။ သပိတ်စခန်းကို သူတို့ကာကွယ်မယ်။ သတင်းတွေက လည်း ရထားတာရှိတယ်။ သပိတ်စခန်းကို ရဲအင်အား အလုံးအရင်းနဲ့ ၀င်စီးလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့.. မနက်ဖြန်က ရှစ်လေးလုံးနေ့.. တနိုင်ငံလုံး တပ်လှန့်ထားတဲ့နေ့… သတင်းရထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ.. သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များက အဲဒီ့ညမှာ.. အလုံးအရင်းနဲ့ ၀င်စီးဘို့ကြိုးစားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ မားမားမတ်မတ် ခုခံမှုကြောင့်.. သူတို့သပိတ်စခန်းကို ၀င်မစီးနိုင်ခဲ့ဘူး..။ တပ်လှန်သွားခဲ့တယ်။ ညပိုင်းရောက်တော့.. သပိတ်စခန်းတည်ရှိရာ ဆုံတိုက်ရပ်ကွက်က အမာခံလူထုတွေက.. ကျနော်တို့ကို လျှို့ဝှက်ခေါ်ထုတ်သွားပြီး.. လုံခြုံတဲ့နေရာကို ပို့ပေး ထားတယ်။ မှတ်မိနေပါသေးတယ်.. ကျနော်ရယ် အတွင်းရေးမှူး အောင်မျိုးရယ်၊ တွဲဘက်-အတွင်းရေးမှူး ကျော်စွာရယ် လှိုဏ်ဂူကြီးတစ်လုံးထဲ ၀င်အိပ်ရတယ်..ကောင်းကောင်းလည်း အိပ်မရပါဘူး။ အပေါ်ကသဲတွေက တဖျောဖျောကျဆိုတော့.. ပေးထားတဲ့.. စောင်တွေကို ခေါင်းမြီးခြုံပြီး ကွေးနေရတာပေါ့။ အားလုံးက မနက်ဖြန်အတွက် ရင်ခုန်နေကြတော့.. တော်တော်နဲ့ အိပ်မပျော်နိုင်ကြပါဘူး။
သြဂုတ်လ ၈ ရက် ၁၉၈၈
မနက်မိုးလင်းတော့ ကျနော်တို့ သပိတ်စခန်းရှိရာကို သွားခဲ့တယ်။ လုံခြုံရေး တာဝန်ယူထားတဲ့သူတွေက ညကသပိတ်စခန်းကို ၀င်စီးဘို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့… ရဲတွေကို သူတို့ဘယ်လို တုန့်ပြန် ကာကွယ်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို ပြန်ပြောပြကြတယ်။ ရဲတွေဂျင်ကလိနဲ့ လောက်လေးတွေမှန်ပြီး ရှေ့ဆက်မတက်ရဲပဲ ပြန်ဆုတ်သွားကြတယ်။ မနက်၈နာရီလောက် ရောက်တော့.. လူတွေတော်တော်များများ ရောက်လာကြပြီ… ခွပ်ဒေါင်းအလံတွေ ကိုယ်စီကိုယ်စီ လွှင့်ထူလို့… ကျနော်တို့က ၁၀နာရီမှာ ချီတန်းလှည့်လည် ဆန္ဒပြပွဲလုပ်ဘို့ သတ်မှတ်ထားတော့… ၁၀နာရီလောက်မှာ.. လူထုကြီးက သပိတ်စခန်းထဲမှာ ခြေချစရာ နေရာ မရှိလောက်အောင်ကို များနေပြီ..။ အဲဒီနေ့မှာ ကျနော်တို့ထဲက ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေ အကုန်နီးပါးလောက် ပြန်ဆုံနိုင်ကြတယ်။ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ မင်းရဲထွန်းကား ၊ တို့ပြန်လာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သပိတ်လမ်းကြောင်း ချီတက်ရာ လမ်းကြောင်း ရေးဆွဲနေစဉ်မှာပဲ… အမကြီးတယောက်က အမောတကော ပြေးလာပြီး ကျနော်တို့ကို လာပြောတယ်…
“မောင်လေးတို့.. အမအရေးကြီးတာလေး တခုပြောချင်တယ်..။ မောင်လေးတို့ယုံတာ မယုံတာခဏထားပေါ့.. အမ ပြောတာလေးတော့ နားထောင်ပေးပါ… အမကို အကြံပေးတဲ့သူရှိနေလို့ပါ။ မောင်လေးတို့ ချီတက်ရင် တောင်ဘက်ကို ဦးတည်ပြီးမသွားကြပါနဲ့ နဂါးဦးခေါင်းက ဒီလမှာ မြောက်ဘက်ကိုဦးတည်နေတယ်… တောင်ဘက်ကို ဦးတည်သွားတယ်ဆိုရင်.. နဂါးခံတွင်းထဲ ၀င်သွားသလိုဖြစ်မယ်။ အစားခံရလိမ့်မယ်… အမတောင်းပန်ပါတယ်။ …မသွားကြပါနဲ့… မြောက်ဘက်ကို ဦးတည်ထွက်ပါ….” သူကိုကြည့်ပြီး ကျနော်တို့ တယောက်ကို တယောက်ပြုံးမိကြ တယ်…ဒါနဲ့ပဲ.. ကျနော်တို့အားလုံးက.. တောင်ဖက်ကို ဦးတည်ထွက်မဲ့ လမ်းကြောင်းကို ပြောင်းပြီး မြောက်ဘက်ကို ဦးတည် ထွက်လိုက်ကြတယ်။ ပြီးတော့.. ပစ်ခတ်နိုင်လောက်တဲ့ လမ်းကြောင်းတွေကို ရှောင်ပြီး ချီတက်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီနေ့က ပစ်တာခတ်တာ လုံးဝမလုပ်ခဲ့ဘူး။ ပါဝင်လာတဲ့ လူထုအင်အားကြီးကလည်း ကြောက်စရာ ကောင်းလောက်အောင် များလိုက်တာမှ မပြောပါနဲ့တော့ .တမြို့လုံးမှာရှိနေတဲ့ လူထုကလည်း အားပေးလိုက်ကြတာ။ ကျနော်တို့ တယောက်ကို တယောက်ကြည့်ရင်း ကျေနပ်မိခဲ့ကြတယ်။ ဘာပဲပြောပြော ကျနော်တို့ ကြိုးပမ်းချက်တွေ အောင်မြင်သွားပြီ။ ပူပြင်းလှတဲ့ အညာနေရဲ့ဒဏ်ကိုတောင် ဘယ်သူမှမမှုကြဘူး။ မြို့လည်မှာ ကျနော်နိုင်ငံရေး တရားဟောတော့… အောက်ကလူထုကို ကြည့်ပြီး။ ကြက်သီးတွေတောင် ထမိတယ်…။ အားလုံးရဲ့ မျက်နှာသွင်ပြင်တွေဟာ.. နာကျည်း ခပ်ထန်နေကြသလိုပဲ… ကျွေးကြော်သံတွေကို နောက်ကလိုက်အော်သံတွေဟာ…. မိုးကြိုးအလုံး လိုက်အလုံးလိုက် ပစ်ချလိုက်သည့်အလား..
တပါတီအာဏာရှင်စံနစ် ပြုတ်ကျရေး---------- တို့အရေး တို့အရေး
ကျောင်းသားသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေး----------------- တို့အရေး တို့အရေး
အရေးတော်ပုံ------------------------- အောင်ရမည်၊ အောင်ရမည်။
အပိုင်း (၅ ) ဆက်ပါဦးမည်